Imigangatho yabucala yeWebhusayithi | Martech Zone
Imigangatho yabucala yeWebhusayithi
NgoLwesihlanu, ngoJuni 8, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 UMarty Thompson
Mna noMarty sasiphezulu e IKlabhu yeendaba yezeNtlalontle eChicago ibanjwe ngabantu abalungileyo kwi Edelman. Umxholo wawusekuhleni kwiMithombo yeendaba yezeNtlalontle kwaye iipaneli zazinguTom Chernaik, CEO we Cmp, UMichael Kiefer, GM kwi Igama loKhuseleko, Rich Sharp, SVP yeQela lezeMpilo yeDijithali uEdelman kunye noRoula Amire, uMlawuli oLawulayo we Ragan.com. Ingxoxo igxile kwisoyikiso kunye nomngcipheko onxulumene nemithombo yeendaba zentlalo kunye nendlela iinkampani ezinokucwangcisa ngayo, zikhusele kwaye ziphendule kwimicimbi. Ibiyingxoxo emnandi kwaye ezinye zeemveliso ezinkulu zijongana nazo ngoku… ndiyathemba ukuba amashishini amancinci naphakathi ayaqala ukuqaphela nawo!
Iintengiso zentengiso ziphuhlisa ngakumbi izixhobo zokulandela umkhondo zabathengi ezikwi-intanethi, iiarhente zomanyano kunye namaqela anomdla wabathengi anyanzelisa imigangatho yabucala engqongqo. Musa ukuKhangela, umkhondo wokugqibela wokulandela umkhondo wewebhu e-US uyafumana umhlaba, kunye neebrawuza kunye neenkampani ngokunyanzelekileyo ukuba zinike itekhnoloji yokuphuma ukuze kugcinwe ulwazi lomntu ngamnye luyimfihlo. Kukho kwangaphambili eYurophu: i-European ePrivacy Directive ngumthetho ofuna ukuba iisayithi zisebenze ngokuthe ngqo ukufumana imvume kubakhenkethi ukuba bazilandele. Jonga imicimbi ekufutshane, kunye nemingxunya yemali enokubakho echaphazela ezinye iimpembelelo.
Le infographic ikhutshwe ngu Khanyisa. Ukuqinisekisa ubumfihlo sisisombululo sabucala kunye nesokuthotyelwa esiqinisekisa ukuqokelelwa kwedatha yabathengi kwiwebhusayithi yakho kuthobela ngokupheleleyo umgaqo-nkqubo wakho wabucala kunye ne-US kunye nomthetho wamanye amazwe ngokujonga zonke iithegi zakho zewebhusayithi. Ensighten Privacy yenza ukuba iisayithi zithobele ngokupheleleyo ii-Do Not Track (DNT) izihloko zebrawuza kunye ne-UK Cookie Law yokungena, kunye nokwenza ukuba unikeze abathengi ukuqokelelwa kwedatha ukuphuma okanye ukungena kwiwebhusayithi yakho.
Uqoqosho lweNtlalo kunye ne-Moontoast